कसरी प्रेम पारिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ?
सबै मानिसहरूले माया गर्छन् र माया गर्छन्। तथापि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हल्का भाव धीरे-धीरे फीका र गायब हुन्छ। यो कुरा बुझ्न कसरी थाहा छ कि प्रेम पास गलती रोक्न सक्छ र केटीलाई बताउछ कि यो निरन्तर सम्बन्धको लायक छैन र, यसको वाहेक, विवाहको गुनासो सँग जोड्नुहोस्।
कसरी थाहा छ कि प्रेम बितेका छ - चिन्हहरू
यदि एक व्यक्तिले तपाइँलाई एक व्यक्तिलाई माया गर्न रोक्न कसरी बुझ्नको प्रश्नको उत्तर खोज्छ भने, त्यसपछि उहाँ आफ्ना भावनाहरू निश्चित हुनुहुन्न। तपाईं कसरी प्रेम बाहिर गएका छन् भनेर बुझ्न को लागी आउनुहोस्:
एक व्यक्ति प्रायजसो अकेलापनको भावद्वारा भ्रमण गरिएको छ। घर मा एक साथी को उपस्थिति बावजूद, एक केटी उनको अकेलापन र कसै संग संवाद गर्न को लागी महसूस गर्न सक्छ।
त्यहाँ साझेदारको धोखाधड़ीको बारेमा ख्याति वा जानकारीको विचार हो। एक केटी आफैले पकड्न सक्छ कि त्यो अन्य मान्छे मनपर्छ जसलाई उसले समय खर्च गर्न चाहन्छ।
निरन्तर झन्डाहरू, र अधिक प्रायः टिफल्सको कारण। प्रेमले मानिसलाई स्वीकार गर्न मद्दत गर्दछ। प्रेमको कमीले यस तथ्यलाई सुरू गर्दछ कि मानिसहरू एकअर्कामा कार्प सुरु गर्न, आफैंमा सहमत हुन सक्दैन, माईन चाहँदैनन्।
अंतरिमता कम से कम छ। प्रेमको कमीले यस तथ्यलाई सर्छ कि युवाहरू एक-अर्कासँग सुत्न मन नपर्ने, अर्को साथीको सपना देख्ने गर्छन्। आन्तरिक अंतरिमता, यदि वर्तमान छ भने, आनन्द नगर्ने र शायद नै हुन्छ।
प्रिय व्यक्ति चासो छ। त्यहाँ उहाँको जलनको भावना हो। एक अपरिवर्तित व्यक्तिले सबै कुरालाई घृणा गर्न सुरु गर्दछ: आवाज, चरा, व्यवहार, ड्रेसिङको तरिका।
यदि विचारहरू मनमा आउँछ भने, कसरी बुझ्न सकिन्छ कि तपाइँ प्रेममा हुनुहुन्न, तुरुन्तै वर्गीकरण निष्कर्षहरू नगर्नुहोस्। यो सम्झना हुनुपर्छ कि प्रेम भावनाहरु समय संग अधिक शान्त हुन्छ। त्यसकारण, भावनात्मक तीव्रतामा कमीले सम्बन्धको नयाँ चरण संकेत गर्दछ, र प्रेमको अन्तको बारेमा होइन।
कसरी प्रेम आकर्षित गर्न?
ईर्ष्या प्रेमको चिन्ह हो?
फोनमा कसरी मानिस प्राप्त गर्ने?
कसरी चुम्बनमा मान्छेलाई संकेत गर्ने?
अमेरिकी विवाहको तयारी
फ्रिजले काम गर्दछ, तर स्थिर छैन
ओवनमा ममीले चक्कुमा माटबलहरू
ब्यूटी केमिला अल्व्स चैरिटी ईवेंट को आकर्षक अतिथि "विविधता को एकता 4"
जर्ज क्लोनीले फिल्म छोड्न र छोड्ने योजना बनाएको छ
24 फोटो जसमा ले डे डायपियोरिओ साँच्चै राम्रो छ
समुद्र केली - नुस्खा संग सलाद
पहिलो ट्रिमिस्टरमा गर्भवती महिलाको पोषण
Chloe Kardashian थियो छाला क्यान्सर
सेन बीनले पाँचौं पटक विवाह गरे
बेखम "प्रेतवाधित घर"
Dandelion संरक्षित - स्वादिष्ट गृह निर्मित उत्पादहरूको लागि उपयोगी व्यञ्जनहरू
घर भित्र आइब्रोहरू रंगीन
विवाह कसरी खर्च गर्ने?
पनीर र नाशपाती संग सुगन्धित पाई
इटालियन ब्लगरले सबै चीजबाट ताराहरूको छविहरू तयार पार्छ जुन हातमा छ
टोरी वर्तनीले आफ्नो भविष्यका बच्चाको सम्मानमा बेबी शोवरमा $ 40,000 खर्च गर्यो
फलको साथ खट्टा क्रीम र जिलेटिनको मिठाई
शरद ऋतु विवाह फोटो सत्र
आंतको एडोडेरेरियोसिस - लक्षण र उपचार